ऐतिहासिक स्वर्णधारी - समसामयिक - नेपाल
महेश्वरमान श्रेष्ठ : बडीबिल्डर | अजित यादव : धावक
नाममा के छ ? महेश्वरमान श्रेष्ठ र अजित यादवलाई सोधे हुन्छ । दुवैले नामअनुसारकै परिणाम दिलाए । महेश्वरमानले १० औँ विश्व बडीबिल्डिङ खेलबाट मुलुकमा पहिलो स्वर्ण भित्र्याएर राष्ट्रको 'मान' राखे । थाइल्यान्डमा आयोजित स्पर्धामा महेश्वरमानले १२ मुलुकका खेलाडीलाई उछिनेका थिए । एउटा खेलका लागि तयारी गर्नै ८ देखि १० लाख रुपैयाँ लाग्छ । खर्चिलो खेलमा पदक दिलाउन उनले थुप्रै कष्ट भोग्नुपर्‍यो । खर्च मात्रै हुन थालेपछि सधैँ खुरुखुरु सहयोग गरिरहने आमाले महेश्वरलाई सोधिन्, "खेलबाट तैँले के पाउँछस् ?" "कुनै पनि काम केही पाउन मात्रै गरिँदैन । मरेपछि छाडेर जाने चिनो ठूलो कुरा हो," महेश्वरमानले जवाफ दिए । त्यही चिनो आज महेश्वर र मुलुकसँग छ । अझ अरु चिनो थप्ने योजना छ, सन् २०२० को मिस्टर युनिभर्स बन्ने ।
कसैले जित्न नसक्ने अर्थात् अजितले मुलुकलाई एथ्लेटिक्समा पहिलो युथ एसियाली स्वर्ण दिलाए । हङकङमा भएको ३ हजार मिटरको दौडमा अजितले ८ मिनेट ३० सेकेन्ड ३२ मिलिसेकेन्डमा पूरा गरेर यो सफलता हात लगाएका हुन् । पूर्वफुटबल खेलाडीसमेत रहेका १७ वर्षे अजितले एथ्लेटिक्समा फड्को मारेको सुरुआतीमै स्वणिर्म जितको स्वाद त चाखे नै, मुलुकलाई समेत ऐतिहासिक उपलब्धि सुम्पिए ।
मध्यम आर्थिक हैसियतवाला अजितले जितपछि प्रदेश सरकारबाट पाँच लाख रुपैयाँ पाए । एक वर्षका लागि केही कर्पोरेट संस्था मिलेर मासिक ६० हजार रुपैयाँ दिनेछन् । आगतमा अजितबाट अझै अचम्मलाग्दा उपलब्धि मुलुकले पाउन सक्छ ।